Tababar kusaabsan Sidii loo kordhin lahaa Xarumaha-caafimaadka lagu Daweeyo Cudurka (Leishmaiasis) oo loo Qabtay Xirfadlayaal Caafimaad oo kasocday 12 xarumo-caafimaad Degmooyinka Qaar Ka Mida ayaa Soo Gabagaboobay. - Cakaara News
Tababar kusaabsan Sidii loo kordhin lahaa Xarumaha-caafimaadka lagu Daweeyo Cudurka (Leishmaiasis) oo loo Qabtay Xirfadlayaal Caafimaad oo kasocday 12 xarumo-caafimaad Degmooyinka Qaar Ka Mida ayaa Soo Gabagaboobay.
Jigjiga(CakaaraNews) Isniin Jan06,2013.Tababarkan Ayaa kusaabsanaa Sidii loo kordhin lahaa Xarumaha Bixiya Daawaynta Cudurka loo yaqaan (Leishmaiasis) iyadoo hada ka hor lagu baadhi jiray Cudurkan 5 xarumo caafimaad laguna dawayn jiray 2 xarun Caafimaad oo kamida 12kan Xarumo Ee ku kala yaala Qaar kamida Degmooyinka DDSI.
Hada ka hor ayaa Dawaynta Cudurkan Gacan ku Siin jirtay Ha'adii MSF oo uu Kontoraadkii a Dhamaaday taasoo uu Xafiiska Caafimaadka DDSI uu dejiyay Qorshe Dib loogu Bilabayo Dawayntii iyo Baadhitaakii Cudurkan Afka Qalaad oogu yeedho(Leishmaiasis) inkastoo ay noogu sheegi kari waayeen Cudurkan waxa looguyeedho Afka Soomaaliga.
Furitaankii Tababarkan xafiiska caafimaad DDSI uu U Qabtay Xirfadlayaasha caafimaadka ayaa uu furay Xidhiidhiyaha Ka Hortaga Cudurada faafa Mudane Siraaj Aadan Xasan waxaana uu Kula dardaarmay xirfadlayaasha Inay Si fiican uga Faa`iidaystaan Cashirada lasiinayo Si Ay Ubuuxiyaan meelihii Ay hay`adu Ka baxday iyo meelaha Cusub Ee hada lagu darayba Masuulka Ayaa Sheegay in hada laga Bilaabo Cudurkan (Leishmaiasis) lagu daawayn doono 5 xarumo-caafimaad halka lagu Baadhi Doono 12 xarumo Caafimad ooku yaala Degmooyinka Tababarkan socayMudo Sadex Cisho ah Ayaa Waxaa Cashiradiisa bixinayay Macalimiin ka Socotay Jaamacada Adis Ababa iyo Hay`ada WHO,iyadoona Munaasabadii lagu gabagabeeyay tababarkan uu ka soo Qaybgalay Kuxigeenka Wasaarada Caafimaadka DDSI MUdane C/fataax Siciid.
Mudane C/fataax ayaa ka Warbixiyay Dadaalada uu Xafiisku ugu jiro sidii Xooga loo saari lahaa Dawaynta iyo Baadhitaanka Cudurkan afka Soomaaliga lagu Turjumi kari waayay ee afka Qalaad ku ah (Leishmaiasis).
ugu danbayntii iyo Dardaaran ka dib ayaa Abaalmarino lagu Gudoonsiiyay Tababartayaashii iyo Macalimiintii Casharada Bixinaysayba.